Mgbasa Ozi megide oligarchs & Mafia. Worldwide.
18. February 2018 Oliver Bienkowski
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 18. February 2018
Na mkpọsa megide mafia oligarchs ị ga-ahụ nchịkọta omume na ibe a.
N'oge anyị nọ na Gris otu izu, ebe anyị nọ na-arụsi ọrụ ike megide oligarchy. Anyị na-eme atụmatụ nke anyị
Iji nọgide na-ebu agha na mba ndị ọzọ, enyemaka anyị dịkwa anyị mkpa.
Ihe omuma nke ochichi onye kwuo uche ya bu oligarchy
N'agbanyeghị nsogbu akụ na ụba na-agbawa obi, n'agbanyeghị "mgbanwe", Gris ka dị n'aka ndị oligarchs. Ụkpụrụ austerity na-eme ka ọnọdụ a dịkwuo ike ma mee ka ike nke mmadụ ole na ole karịa ọtụtụ. Site n'enyemaka nke Troika, a na-ekpuchi akụ ala ma na-ere ya na ọnụ ọgụgụ kụrụ ọnụ na ọnụ ọgụgụ ezinụlọ dị ike.
Na George Orwell akwụkwọ 1984 pụrụ ime ihe nile Big Nwanna teta nnukwu akwụkwọ ịma ọkwa na tele Ákwà na ụmụ amaala ma gosi onye bụ onye onyeisi: a obi ọjọọ, aka ike ala. The bosses nke taa, ndị na-sere na ndido urụk n'azụ Mpaghara, eme ọtụtụ ihe ndị ọzọ eji nwayọọ, inconspicuous na na nzuzo. Anyị bụ ndị pikselụ Inyeaka, anyị bịara na February ka Athens itu a nnukwu ìhè na a echefu ihu. Anyị na-ebe ikwughari ili na-ezighị ezi megide ndị Gris. Orwellian projections na Bundestag, bụbu ala lọtrị OPAP, ndị ụlọ ọrụ n'isi ụlọ ọrụ Motoroil Hellas na nke Grik nzuko omeiwu, gwara site pixel Inyeaka, iche na Grik na mba na media na zoro ezo ike nke oligarchs abịa ahụ pụta ìhè. Anyị adọ-elekwasị anya na abụọ Central ọgụgụ nke Greek oligarchy.
Dimitris Melissanidis, utu aha "Agu", bụ ike ịzụta ala ịgba chaa chaa nanị OPAP maka a nta nke ya n'ezie uru ọnụ na a Czech Constrium nke investors. The sales usoro nke OPAP na-adịghị nyere onye Grik na media ajụjụ, dị ka OPAP otu ike, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ ndị dị ike media mmefu ego na Greece, na-eme ya mmetụta n'ime Greek media yiri enweghị nsọtụ. Journalists na-etinye ike nke Melissanidis na ajụjụ na-emenye ya ụjọ n'oge gara aga na ọbụna natara ọnwụ egwu. Kpamkpam random eji mbụ onyeisi oche nke Greek privatization Agency, Stelios Stavridis, nke lekọtara ndị OPAP ndibiat, na nkeonwe ugboelu nke Melissanidis na-efe ya na ememe ...
A na-ele Vardis Vardinogiannis na ezinụlọ ya "ala na steeti". Ekwu na-ekwu na ụlọ ọrụ mmanụ ya bụ ihe bụ isi kpatara na a na-ejikarị ndị na-ere mmanụ diesel na-abawanye uru n'àgwàetiti Gris kama ịmepụta ume ike. Enweghi ike ịmalite mmetụta nke ezinụlọ Vardinnogiannis na Gris, ebe ezinụlọ na-achịkwa akụkụ ndị dị mkpa nke mgbasa ozi Grik (abụọ n'ime telivishọn kasịnụ kachasị na ya bụ ezinụlọ), ìgwè ndị football na, na mbụ, ụlọ ọrụ ego.
PixelHELPER chọrọ ka Gris ghọọ ọchịchị onye kwuo uche ya ọzọ. Iji nweta ihe mgbaru ọsọ a dị oke mkpa, ọ dị mkpa iji gbochie nrụrụ aka nke ndị oligarchs site na iwu ndị nwere nghọta. Ihe ọjọọ Novartis, bụ nke na-eche banyere ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị elu dị ka onye ụkọchukwu mbụ bụ Antonis Samaras, na-akọwa ngwa ngwa nke nghọta maka Greece. N'agbanyeghi ihe kpatara Novartis, ndi otu n'ime akwukwo akuko na-ekwu na nso nso a site na Kọmitii Transparency Congress nke Gris, n'enweghi ihe omuma atu. Ma ọ bụghị naanị nke ahụ. Kọmitii ahụ na-ezere ịkatọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụ ezie na o nwere ike itinye aka na ya dị n'okpuru ikike nke kọmitii ahụ. Nke a bụ ihe na-adịghị anakwere ma gosipụta omume omume rụrụ arụ na-enweghị ntaramahụhụ site n'aka ndị ọchịchị na Gris. Onye isi oche nke Kọmitii Transparency Congress nke Greek, Tasia Christodoulopoulou, ga-eme ihere maka mmechi ya.
PixelHELPER na-achọkwa ka a jụ ajụjụ ndị ahụ n'oge gara aga ma chegharịa iji hụ na ọ dịkarịa ala ịkwụ ụgwọ ụgwọ maka ndị Gris. Ụlọ ọrụ nyocha nke onwe ya kwesịrị ịchọpụta ma mmebi iwu emeela nakwa, ebe o kwesịrị ekwesị, ikpe ụlọikpe maka ndị oligarchs. Anyị na-egosi na anyị na ndị Gris nọ na-alụ ọgụ megide ndị oligarchs, bụ ndị na-arịa nje na mba ebe ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị bi na-ebi n'okpuru ịda ogbenye. Mmebi iwu nke Plutocratic ga-akwụsị ugbu a ma ọ bụ na ọ gaghị enwe ohere maka ezigbo mmalite ọhụrụ maka Gris.
PixelHELPER Foundation bụ mba ụwa, ndị na-abụghị ndị na-emepụta ego na ndị na-ese ihe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Anyị na-ahụ na nkà dịka ihe na-akpasu ma nupụrụ isi, dịka ọdịdị nke ịmara onwe onye na mmụọ nke Enlightenment. Mgbasa ozi anyị na-egosi ohere nke nkà dịka ike ise n'ime ala.
Anyị chọrọ enyemaka gị iji nọgide na mgbasa ozi na Gris. Nye site na #Paypal: paypal@PixelHELPER.tv ma ọ bụ http://PixelHELPER.org/de/Spenden
Maka onyinye n'èzí ụwa dijitalụ:
IBAN: 93 4306 0967 1190 1453 00
Onye nwe: ntọala PixelHELPER enweghị ọrụ
Isiokwu: Ego maka Art & Culture
Akara n'efu. Achọtara akwụkwọ ikike. biko kpọtụrụ "onye na-ese foto: Dirk-Martin Heinzelmann, PixelHELPER.org"
Mgbasa Ozi megide oligarchs & Mafia. Worldwide. April 13th, 2018Oliver Bienkowski